Xukuumada Ismaaciil Cumar Geele oo Abuuraysa Collaad Sokeeye si ay u Badbaado – Rasaasa News
Xukuumada Ismaaciil Cumar Geele oo Abuuraysa Collaad Sokeeye si ay u Badbaado
Feb 23, 2011 d, ethiopia, jibouti, Ogaden, ONLF, Xukuumada Ismaaciil Cumar Geele oo Abuuraysa Collaad Sokeeye si ay u Badbaado
Jabuuti, Feb 23, 2011 [ras] – Waxaa aad looga dayrinayaa xaalada dadka isirkoodu yahay Ogadeenka ee degan dalka Jabuuti, ka dib kolkii ay soo food saartay xaalad argagax, taas oo ah in xukuumada Geele, si gaar ah u ugaadhsanayso dadka isirkaas ah xitaa hadii ay deganaansho Jabuuti haystaan.
Xukuumada Ina Geele Botor, oo ay haysato dhibaato kalsooni daro ah oo kaga imanaysa dadweynaha reer Jabuuti iyo mucaaradka doorashada soo galan, ayaa waxaa uu ka shaqaynayaa sidii uu u abuuri lahaa arimo aan jirin.
Ciidamada Ina Geele Botor, ayaa waxay meel walba ka qabanayaan dadka ay u gartaan in Isirkoodu yahay Ogadeen, waxaa kale oo ay ciidamada Jaandaarantu guryaha kala baxaan dadka. Xukuumadu waxay marmarsiinyo ka dhiganaysaa iyada oo leh “buuraha Jabuuti ku dayran waxaa ka buuxa ONLF, lagu soo tabobaray Eritrea, waxayna doonayaan in ay qabsadaan dalka Jabuuti.”
Waxaynu ognahay in ururka ONLF, uu heshiis nabadeed la gaadhay dawlada Itobiya, oo xiligan uusan jirin waxa colaad ah oo ururka ONLF uu ka wado gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya.
Xukuumada Jabuuti waxay ahaan jirtay waagii hore meelaha ugu muhiimsan ee ay ONLF, taageerada ka hesho, waxaana lagu qaban jiray shirarka muhiimka ah ee ururka ONLF, xiligaas xukuumada Jabuuti dan kama lahayn, hadaba, waa sidee xaalku, xili nabadi jirto?
Dhawaan ayey ahayd, kolkii dad aad u badan oo ah qabiilka Ogadeen, si sharci daro ah looga masaafuriyey dalka Jabuuti, dadkaas oo dhamaantood ahaa dad ka xoogsada dalka Jabuuti, arintaas oo aan laga soo dhawaynin dalka Itobiya.
Wararka aanu ka helayno dalka Jabuuti, waxay sheegayaan in xeryo lagu aruuriyey dad ay tiradoodu kor u dhaafyso 300 oo ruux, dadkaas oo ayna xukuumada Jabuuti meelna u wadin, balse lagu ciqaabayo xeryo ciidan.
Dadkaas ayaa waxaa ka mid ah, dad haysta sharciga Jabuuti, waxayna isugu jiraan arday, ganacsato iyo dad xoogsato ah, waxaa ku jira baa la leeyahay dadka xidhan dad ku dhashay Jabuuti.
Waxaa wax laga xumaado ah in xukuumada Jabuuti, oo daris la ah dalka Itobiya, ay si sharci daro ah oo ciriq ku salaysan ay u ciqaabto dad asalkoodu Somalida yahay haystana dhalashada dalka Itobiya.
Labada beelood ee Ciise iyo Ogadeen, waa dad walaalo ah oo Itobiyan ah dal iyo dawladna wadaaga waligoodna aan waxba isku qaban, ha yeeshee xukuumada Jabuuti ee shacab weynaheedu nacay, suurto gal u noqon mayso in ay iska horkeento labada beelood si ay u sii jirto.
Ina Geele Botor, waxaa xukuumadiisa fara ba,an ku haya mucaaradka reer Jabuuti, waana xaqiiq in ay kursiga ka caydhin doonaan wakhti dhaw.
Masuuliyiinta dawlad degaanka Somali iyo dawlada dhexe ee Itobiya xil baa ka saaraan, muwaadiniinta sida isirka ah ee naxariis darada ah loogu ciqaabayo dalka Jabuuti.
Afar Maraykana oo Lagu Dilay Dalka Somaliya